Abavelisi beKhadi leRfid - iChina iRfid Card abaXhasi kunye neFektri
Ikhadi le-rfid ye-13.56Mhz HF
Amakhadi e-13.56Mhz HF rfid alandela i-ISO 14443A kunye ne-ISO 15693, umthetho olandelwayo we-ISO14443B. Banobukhulu obukhulu be-EEPROM, ukhuseleko oluphezulu kunye nomthengi banokubhala umhla kuwo onke amacandelo nakwiibhloko. Usetyenziso olungakumbi lusetyenzisiwe.
Ikhadi le-rfid ye-125khz LF
IINGQONDO zinika i-EM4305, EM4200, EM4100, TK4100 (iyahambelana ne-EM4100 chip), i-ATMEL T5577 kunye ne-HID 125KHZ LF Smart Cards ehambelanayo, ikakhulu ii-LF Smart RFID Cards zifundwa kuphela njenge-EM4100, TK4100 njlnjl. Iimpawu zinokufunda kwaye zibhale kwakhona idatha ngaphakathi.
Ikhadi le-rfid eliqhelekileyo / ikhadi le-Hybrid
Ikhadi elihamba rhoqo le-rfid luhlobo lwekhadi lokungenisa elinobuhlakani elinobuchwephesha obuphezulu kunye nemisebenzi epheleleyo. Umdibaniso wekhadi elihamba rhoqo, ikhadi elinemvamisa ephezulu kunye nekhadi le-UHF likwaziwa njengekhadi lokuhamba rhoqo. Isetyenziswa ikakhulu kwiibhanki, ezikolweni nakwezinye iindawo.
Ikhadi likaFudan F08
Ikhadi leFudan F08 lenziwe nge-fm11rf08 chip, i-eriyali kunye nesiseko sekhadi; ayithwali mbane; ifumana amandla kumfundi ngokusebenzisa i-eriyali ukuze isebenze, kwaye unxibelelwano nomfundi luyafezekiswa ngetekhnoloji yerediyo.
Ikhadi le-Mifare lisebenzisa i-chip yoqobo ye-NXP, njenge-NXP mifare classic 1k s50, NXP mifare classic 4k s70, NXP mifare Ultralight ev1, NXP mifare Ultralight c, NXP mifare Desfire 2k / 4k / 8k ev1, NXP desfire 2k / 4k / 8k ev2 and I-NXP mifare kunye ne-2k / 4k njl.
I-NFC yitekhnoloji yonxibelelwano engenazingcingo ebonelela ngonxibelelwano olulula, olukhuselekileyo nolukhawulezayo. Xa kuthelekiswa neRFID, i-NFC ineempawu zomgama osondeleyo, ububanzi bebhendi ephezulu kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
Uninzi lwekhadi le-RFID clawshell likwi-125Khz frequency kunye ne-Atmel chip: T5577 okanye i-E-Marine chip: EM4100, sinezinto ezinokukhethwa njenge-chip ezinje ngeTK4100 amakhadi eenzipho xa kufuneka umthengi.